Soo iibso 4-DHEA budada (571-44-8) hplc = 98% | AASraw Prohormone
4-DHEA budada (571-44-8)
/ Products / Prohormone / 4-DHEA budada (571-44-8)
SKU: 571-44-8. Category: Prohormone
AASraw wuxuu la leeyahay karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee 4-DHEA budada (571-44-8), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Markaad rabto inaad kor u qaaddo xoog iyo murqo caafimaad, hormoonnada sida 4-DHEA budada waa hal dariiqo oo laga faa'iideysan karo waxqabadka caafimaadka iyo murqaha. 4-DHEA waa tallaabo dhiiri-galin ah oo kor u qaadaya xajinta nitrogen, xoog, iyo mugga dhiigga muruqa. Ku darida 4-DHEA si aad u tababbarto xooggaaga iyo barnaamijka dhismaha jirka oo leh natiijooyin cajiib leh waxyeelo yar.
4-DHEA video dufan
4-DHEA budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: 4-DHEA budada
Formula kelli: C19H28O2
Miisaankani waa: 288.42
Dhibcaha Biyaha: 138-141 ℃
Kaydinta Nabadgelyada: Heerkulka qolka
Color: Caddaan cad ama midab cad oo budada ah
4-DHEA wareega budada
Magacyada kiimikada: 4-DHEA budada
Magacyada kale: 4-Dehydroepiandrosterone, 4-DHEA budada, 571-44-8
Isticmaalka budada 4-DHEA
5-DHEA waa habdhaqameed kaas oo damacsan in waxqabadyada caafimaadka leh iyo quudinta oo ay dib u soo celiyaan heerarka DHEA ee jirka. Waxay wali socotaa ilaa inta geedi socodka ay bilaabantay waqtiga saxda ah. Hoormoonka DHEA ee soo saarey qanjidhada adrenal, laakiin maskaxdu waxay ka dhigtaa mid sidoo kale. DHEA waxay u ogolaataa soo saarida f androgens iyo estrogen, taas oo ah faa'idada ay rabto inta badan kuwa doonaya in ay kordhiyaan xajmiga muruqyada iyo murqaha. Marka jirku jiraa, DHEA wax soo saarka jirka ayaa yaraynaysa. Yaraynta DHEA ee jirka ku jirta waxay keenaysaa jirrooyin hormoon, hoos u dhac ku yimaada jinsiga, iyo osteoporosis.
4-DHEA budo waa habdhaqameed oo u eg DHEA dabiiciga ah ee jidhka. Faa'iidooyinka lagu daro 4-DHEA budada caafimaadkaaga iyo qorshaha xoogga muruqyada waa mid aad u badan.
Dhibaatooyinka 'estrogenic' ee hoos u dhaca badanaa waxay la xidhiidha steroids anabolic. Dhibaatooyinka 'Estrogenic' waxaa ka mid ah timaha korodhka ah, naaska naaska, unugyada naaska yar ee haweenka, timaha wajiga dumarka, tijaabooyin yar yar oo ragga, iyo niyadjab. 4-DHEA ma laha saameyn isku mid ah. Dhibaatooyinka 'Estrogenic' waa kuwo waxtar leh, sidaa daraadeed waxay yihiin natiijada hormoonka kor u kaca.
Cufnaanta dadweynaha oo la kordhiyo xajinta nitrogen ee muruqa
Kordhinta kaloriinta la kordhiyey ee musqusha ee ugu badan
Nidaamka difaaca jirka oo hagaagay
Awoodda murqaha oo hagaagsan
Dheecaan muruqa ah oo waqti yar ka dhiman.
Dhibaatooyinka murugada oo la mid ah natiijooyinka aan sunta ahayn
Pro Prabursor Pro
Kacsanaanta gardarrada ee Gym
Kordhiya Muscada Muscada Mass
Aan Karin Karagga Beerka
budo 4-DHEA waa in uu yahay baahida in la dheelitiro si kor loogu qaado mass muruqa, ma waxaa la yareeyo. Kala hadal xirfadle caafimaad oo ku saabsan siyaabaha loo dari karo si loo daboolo baahidaada gaarka ah. Waxaa muhiim ah in ka mid ah budada 4-DHEA taageero wareegga iyo therapy wareegga post. Waxa kale oo sahlan in ay qaataan budada 4-DHEA qaab ah kiniin si loo yareeyo shuruudaha kharashka iyo qiyaasta. budo 4-DHEA waa xarunta afka ah in uu yahay sare u xoog iyo la nuugo karaa jidhka ka dhakhso badan adigoo isticmaalaya kaabsoosha Liposomal our.
Waa maxay qiyaasta budada 4-DHEA
4-Androsterone waa qoyaan adag oo xoog leh, kaasoo isbeddelaya testosterone iyada oo loo marayo isbeddel laba-talaabo ah marka la nuugayo. Waa feejignaan aan la garanaynin, taas oo macnaheedu yahay in uu leeyahay saamayn yar ama diiqad saaran beerka iyo xubnaha isticmaalaha.
6-Andro si fiican ayuu u shaqeeyaa sidii xargaha ama loo isticmaalo waxyaabo kale oo loogu talagalay dhagxaanta. 700 ilaa 1,000 mg, waxaad helaysaa natiijada ugu fiican marka la isticmaalo hal wareeg oo isbeddel ah. Qayb ka mid ah xargo, 4-Andro qiyaasaha macmalka macaanku waxay u dhexeeyaan 300 ilaa 500 mg.
Kuwa bilowga ah: 4-Androsterone 4 ilaa toddobaadka 6 ee 300-500 mg.
Isticmaalayaasha halyeeyada: waxay maamushaa 4-Androsterone for 6 illaa 8 usbuucyada 300-750 mg.
Sida ay u shaqeeyaan budada 4-DHEA
Prohormones waa xal macquul ah oo loogu talagalay natiijooyinka ugu badan ee hoormoonka. Prohormones waa xeryaha loo qaato hadal ahaan. Prohormone macnaheedu waa ficilku wuxuu noqon karaa hormoon Isaga keligood, iyagu ma shaqeynayaan. Shaqadooda waa inay wareegto dhiigga. Marka hormoonka loo bedelo hormoon, wuxuu xakameynayaa heerarka hoormoonka. Ka feker habka hormoonka ah ee ah protein-protein oo u bedelaya borotiinka si kor loogu qaado waxqabadka isboortiga iyo caafimaadka muruqa. 4-DHEA budow waa mid ka mid ah hababkaas.
Kadib markii la wada baabi'iyo, 4-Andro waxay gashaa dhiiggaaga wuxuuna u beddelaa testosterone. Xaruntu waxay bilaabi doontaa in ay yeeshaan dabeecad aad u sarreeya oo ah anabolic, taas oo keeneysa in cabbirka iyo xoogga ay kor u qaadaan iyada oo kor loo qaadayo jarijigaaga galmada - oo ku siinaya in la yaab leh "Alpha Male Ecstasy."
4-Androsterone ayaa bartilmaameed ka dhigtay horumarka muruqyada gaar ahaaneed, oo ku wareegsan 8-12 qiyaasta muruqa caanaha ah ee ku jira 4 illaa 6 usbuucyadii hore ee fulinta hormoonka. Ka digtoonow in saameyntani ay ka sii muuqan doonto cuntada saxda ah iyo jimicsiga.
Intaa waxaa dheer, filan inaad hesho natiijooyinkan:
Awood wanaagsan iyo xoog
Goynta la hagaajiyay
Waqtiga soo kabashada degdega ah
Haa, waxaad u baahan tahay taageero wareega markaad qaadato 4-Andro maxaa yeelay waxay saameyn kartaa cadaadiska dhiiggaaga. Tani waxay sidoo kale muhiim u tahay dhiirigelinta heerarka cadaadiska dhiigga.
Sidoo kale, daaweynta wareega dambe ee loo yaqaan 'PCT' waa qayb muhiim ah ee wareegga maaddaama ay si macquul ah kuugu caawineyso inaad ku haysato natiijada adoo gargaaraya jidhkaaga si dib loogu soo celiyo dheelitirka hormoonka caadiga ah.
Waxaa jira dhibaatooyin dhowr ah oo aad u baahan tahay inaad ogaatid. 4-Andro waxay leedahay dhammaan saameynaha kale ee 1-Andro.
Khatarta timaha luminta, finanka, xoojinta qanjirka 'prostate', xakameynta tijaabada ah, cadaadiska sare ee jirka, cadaadiska sare, iyo arrimaha kale ee wadnaha.
Jirkaaga LDL (xun) ayaa kor u kici doona, HDL (wanaagsan) kolestarool ayaa hoos u dhigi doona. Uma wanaagsana wadnahaaga.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinkan daawadu waxay joojin doontaa usbuucyo kaddib markaad wareegsanayso. Sidaas awgeed maaha waqti dheer.
Samee inaad gasho shaqada ka hor, ka dib, iyo muddada wareeggaaga. Sidoo kale ku hay daweynta wareega wareega.
Waxaad hoos u dhigi kartaa saameynta daawooyinka adigoo si fudud u yareynaya dhererka wareeggaaga iyo / ama yareynta qiyaasta.
Amar wayn ayaa loo diri karaa 3 maalmaha shaqada ka dib bixinta.
4-DHEA Suuq-geynta Ganacsiga
Miyuu 4-DHEA Miyuu Wax Dhici karaa?
4-Andro wuxuu leeyahay wax yar oo aan wax saameyn ah lahayn. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto qaab beddelid qalliin oo yar, qanjirada murqaha, cadaadiska dhiigga sareeya, gardarrada iyo xaaladaha qaarkood ginecomastia (gyno).
Xannibaadaha estrogen ayaa lagama maarmaan u ah in la yareeyo isbedelka estrogen isla markaana ka fogow gyno iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ku xiran estrogen. Dhibaatooyinkan waa la yareyn karaa ama si buuxda looga hortagi karaa kaalmada masruufka saxda ah.
Sida loo iibsado 4-DHEA budada laga bilaabo AASraw
4-DHEA Mucjiso budada:
Sidee Muun 4-DHEA U Noqon Doonaa Testosterone?
Diinogest Powder (65928-58-7)
qiimeeyay 2.67 out of 5
Algestone acetophenide (DHPA) budada (24356-94-3)